China Led Solar Light Ip65 Die Cast Aluminum Street Housing Smart 90w 120w 200w Outdoor Waterproof Lighting and circuitry Design ROHS emepụta na suppliers | Kasem
Led Solar Light Ip65 Die Cast Aluminum Street Housing Smart 90w 120w 200w N'èzí Waterproof Lighting na Circuitry Design ROHS
Okpomọkụ agba (CCT): 6000K (Ọhụụ ìhè), 3000K-6000K
Nrụpụta ọkụ oriọna (lm/w): 165
Oge ọrụ (awa): 10000
Voltaji ntinye (V): 6
Igwe ọkụ na-egbuke egbuke (lm): 1000
Okpomọkụ na-arụ ọrụ (℃): -20 ~ 50
Nọmba nlereanya: KAS-03
Ngwa: ROAD, GARDEN, DOORWAY
Aha: okporo ụzọ ìhè anyanwụ
Ogwe anyanwụ: 6V/35W
Ụdị batrị: batrị LiFePO4
Oge nchaji: 6-8 Awa
Aha Nlereanya KAS-03 KAS-04 KAS-05 KAS-06
Ike 100W 200W 200W 300W
Ikanam 3030 206PCS 3030 314PCS 3030 572PCS 3030 419PCS
Oke panel nke anyanwụ 25W 35W 55W 45W
Oke batrị 3.2V 20AH 3.2V 30AH 3.2V 50AH 3.2V 40AH
Oge ịkwụ ụgwọ 8H
Oge ọrụ 24-36H
Ọkwa nchekwa IP65
Ụdị njikwa Njikwa ọkụ+ njikwa anya
Akụkụ ngwaahịa 470*190*90MM 470*190*90MM 575*235*90MM 575*235*90MM
Ìhè okporo ụzọ anyanwụ:Igwe ọkụ n'okporo ụzọ anwụ na-enwu enwu nke ukwuu, IP65 mgbochi mmiri na nguzogide ihu igwe. Nhọrọ kacha mma maka ụgwọ ọkụ eletrik n'efu.
Ụdị ihe mmetụta ọkụ na ihe mmetụta ngagharị:N'uhuruchi ruo n'ụtụtụ, ọkụ na-aga n'ihu ruo awa 13 (na-akwụ ụgwọ zuru ezu), Ọ ga-agbanwe na-akpaghị aka ka ọ bụrụ ihe ngosi mgbe ọ chọpụtara ihe na-agagharị. Ọ nwere ike ichebe ụlọ gị mgbe ndị ị na-amabughị na-abịarute. Nchekwa ike kacha.
Njikwa anya:Njikwa ime anya na-enye mma iji n'ebe dị anya maka ọtụtụ ụdịdị. Ụdị ntinye, ọnọdụ ọkụ mgbe niile, ọnọdụ oge. Ogologo njikwa anya ihe ruru. 26ft (batrị gụnyere)
Nwụnye dị mfe:Enweghị njikọ eletrik achọrọ. Ụzọ 2 nke ntinye, a na-agbanye otu na mgbidi, otu na-etinye ya na ogwe osisi na dayameta nke 2 ruo 4 inch. (ihe eji eme mgbakọ gụnyere)
Ọrụ afọ 2 gachara ahịa:Anyị na-enye ọrụ na-ere ahịa ọnwa 24 na-enweghị nchegbu, maka ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa a, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ ọrụ ndị ahịa anyị nwere enyi. Anyị na-ekwe gị nkwa 100% afọ ojuju.
Nkọwa ọrụ bọtịnụ ime
Oke kacha dị irè nke njikwa anya bụ 27 ụkwụ. Mgbe ị na-eji remote control, ị ga-eche ihu oriọna ahụ ozugbo.
GBANYE -- Gbanyụọ ọkụ -- Gbanyụọ ọkụ
● -- 100% ihie ◐ -- 30% ihie
+ -- Mmụba ihie--- Ọcha Redctio
WiFi -- Rader sensọ mode 6H--6H 100% ihie /4+4--4H 100% ihie+4H ihe mmetụta ihe mmetụta/8H--8H 100% ihie
4+6--4H 100% ihie+6H ọnọdụ ihe mmetụta ngagharị
4+8--4H 100% ihie+8H ihe mmetụta ihe mmetụta
Kwesịrị ekwesị maka ihu igwe ọ bụla
Oyi na-eguzogide, ike na-arụ ọrụ na okpomọkụ nke -4 ℉-176 ℉ ， IP66 Waterproof, mgbochi ịwa ahụ, dustproof, okpomọkụ dissipation, ịgbatị ndụ nke n'èzí ọkụ, elu okpomọkụ na-eguzogide, mgbochi ịka nká, wdg.
Ọdịnaya ngwugwu kwa Igbe
• 1 x 400W ìhè anyanwụ (24.2*9.4in)
• 2 x Igwe ọkụ (27.6 * 20.9in)
• 1 x Nkwado mgbago
• 2 x Mpempe njikọ
• 1 x Njikwa anya
• Ngwa Mgbakọ edobere maka mgbakwasa mgbidi na ogwe osisi
Ụdị nwụnye abụọ
Na-abịa na mgbakọ ngwa setịpụrụ , ị nwere ike ịkwanye ọkụ ọkụ a na mgbidi, ogwe osisi, osisi, mbara ihu, ebe ọ bụla n'èzí. Enweghị wiring achọrọ, enweghị mmezi, ụgwọ eletrik 0.
Oge: 4-6H (Site na anyanwụ)
Ọkụ na-akpaghị aka n'ọchịchịrị
Ebubo zuru oke, gbanye ọkụ maka 10-12H
Nke gara aga: Modern smd New Solar Led Street Light Outdoor Lighting 50W 100W 200w IP65 Waterproof
Osote: Igwe ọkụ na-ere anwụ n'okporo ámá oriọna sola ọkụ
Ọpụrụiche Hot ere Waterproof Aluminium Street ...
Igwe ọkụ anwụ na-adịghị mma Ip65 dị elu,...